Tani waa Diablo Immortal si aad ugu keento taxanaha mobilkaaga oo aad ugu raaxaysato | Androidsis
Blizzard wuxuu ku muujinayaa fiidiyowga ciyaarta 'Diablo Immortal': si fudud sheeko
Manuel Ramirez | | Ciyaaraha Android, Noticias
Shalay Blizzard wuxuu naga tagay inaan kudhaco kursiga markii aan ku dhawaaqayay Diablo 4 dhowr fiidiyow iyo midka noqon doona mid weyn oo ka mid ah ciyaaraha loogu talagalay Android: Immortal Diablo. Fiidiyow ka badan 3 daqiiqo, wuxuu ku tusayaa gameplay-ka waxa aan cidina fileynin, guud ahaan «Ibliis» oo leh ciyaartoy badan iyo heer farsamo oo si fudud u sheekaysan.
Tan iyo markii la shaaciyay Diablo Immortal, iyo inbadan sababta oo ah cidda ku horumarinaysa nooca mobilka, shaki ayaa soo ifbaxay maxaa yeelay waxay ahayd isku day deg deg ah waxa Diablo saga uu ahaa. Laakiin waxba, daqiiqadahaas fiidiyowga ah Blizzard ayaa ka yaabsaday taageerayaasha taxanaha si aad ah sannado badan, xitaa kuwa ugu adag, sida kuwa ugu cusub ee la kulmi doona Sanctuary markii ugu horeysay. Xilli cusub oo loogu talagalay ciyaaraha moobiilka ayaa soo dhowaanaya; oo ha u ogolaadeen Fortnite iyo PUBG Mobile.
1 Blizzard wuxuu muujinayaa sheekada Diablo Immortal, fasallo iyo gameplay
2 Lix fasal oo la ciyaari karo iyo "Xirfadaha Ultimate"
3 Aad uga xiisa badan sidii hore
Blizzard wuxuu muujinayaa sheekada Diablo Immortal, fasallo iyo gameplay
Aqoonsiga midka qora qoraaladan inyar kayar 20 sano kahor waxaan horey ugu ciyaarnay guriga maxalliga ah illaa Diablo 2, xiisaha loo qabo sheekadan ayaa ka sii muuqata. Iyo in ka sii badan markii Diablo 3 uu kala nastay Diablo 2 iyo gododkeedii si aan kala sooca lahayn loo soo saaray iyo muuqaalka muuqaalka ah oo ka sii "madow" ama ka mugdi badan Diablo 3 dheeraad ah "WoW" (World of Warcraft, sidoo kale Blizzard's mmo). Markaa marka la arko sida ciyaartu u muuqato iyo sawiradaas aan waxba ka badneyn oo kaliya inay naga farxiyaan, waa war weyn shalay BlizzCon 2019.
Kahor intaanan si faahfaahsan uga hadal qaar ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan gameplay ee fiidiyowga ay daabacday Blizzard ee loogu talagalay Diablo Immortal, waxaan xoogga saareynaa xogtaas ay ka muujisay ciyaartan moobiilka. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee aan ku arki doonno Diablo Immortal Marka loo eego cinwaanadii hore ee Diablo, waa qaabkii MMO; Taasina sidoo kale waa halka ay rasaastu la socoto Diablo 4.
Blizzard wuxuu iftiimiyay in Diablo Immortal uu ku saleysnaan doono ciyaaryahan, laakiin ay jiri doonaan waxyaabo badan oo ciyaartoy badan leh oo ay ka mid yihiin aaggag joogto ah oo la wadaago, 4 ciyaartoy 'instantiated' godadka godadka, taageerida qabiilooyinka, nidaamyada bulshada ee aan ku arki karno ciyaaraha kale, iyo waxyaabo kale oo badan.
Lix fasal oo la ciyaari karo iyo "Xirfadaha Ultimate"
Haddii aan wax ka ogaan lahayn jiritaanka Dhimashada Diablo ee saddexda fasal ah, sida Barbarian, Monk iyo Wizard, saddex kale ayaa shalay looga dhawaaqay BlizzCon, Saliibiyiinta, Jinniga ugaarsade iyo Necromancer; lix fasal oo aan ku hayno Diablo 3 oo loogu talagalay kuwa ku ciyaara Blizzard ARPG.
Calaamadaha Diablo Immortal ayaa yeelan doona the «Ultimate Skills» la heli karo taasina waxay kordhin doontaa weeraradaada aasaasiga ah leh casriyeyn xoog leh markii la geeyo. Waxaa sidoo kale jiri doona waxyaabo halyeeyo ah oo la heli karo si loogu beddelo awooda dhammaan noocyada iyo noocyada burburka ee aan ka ognahay ciyaaraha Diablo. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ku dhex dari karnaa Dab-damis Orb la qaboojiyey, ama xitaa fallaaraha Demon Hunter u rogi karnaa bam-gacmeedyo adoo adeegsanaya awoodda Strafe.
Ugu dambeyntiina, Blizzard wuxuu caddeeyay in qorshaheeda uu yahay bixiyaan taageero joogto ah oo dhaji cusbooneysiinta mawduucyada joogtada ah ka dib sii deynta Diablo Immortal, oo ay ku jiri lahayd goobo cusub, sheekooyin, godod, madax, iyo fasalo cusub. Waxyaabaha ku saabsan macaamil-ganacsiyeedyada yar yarna wuxuu si cad u sheegayaa: "waxaan qaadan doonnaa waqti ku filan oo aan ugu qabanno sida ugu habboon."
Aad uga xiisa badan sidii hore
Ka dib dhadhanka dhanaan ee afka ka tagay Ibliis aan dhiman maalintaad ku dhawaaqday sanad uun ka hor, ku dhawaaqistii shalay ee Blizzcon oo leh fiidiyowgaas wax kayar 3 daqiiqo ayaa aad nooga yaabisay. Gaar ahaan loogu talagalay dareemaan caraf udgoonkiisa waxa sagaalku had iyo jeer ahaa, inkasta oo waxoogaa muuqaal ah oo jiidaya waxa Diablo 3 yahay, iyo dareenka ah in Blizzard ay dhigeyso wax kasta oo ay leedahay si ay ugu degto ciyaaraha moobiilka sida ay ku sameysay waqtigeeda Diablo, Starcraft 2 ama World of Warcraft, ciyaaraha calaamadeeyay taariikhda adduunkan oo u dhigay inay tahay mid ka mid ah shirkadaha ugu fiican abid.
Fiidiyowga aan ka helno, in khariidadu aysan noqonayn wax yar iyo inaan runti dooneynay inay tani noqoto kiiska ka socda moobilka (ma jiraan wax ciyaaro ah nooca Diablo ah oo kuu oggolaanaya inaad sahamiso godod muddo ka badan 3 ama 5 daqiiqo ah); in sawir gacmeedyadu ay yihiin kuwo fudud oo heer sare ah oo ka dhigaya kuwa talefoonada sare leh inay layaabaan maalinta la bilaabayo, iyo sida ay u egtahay inay qaadan doonto waqti ka dheer inta aan jeclaan lahayn; in aan la dagaallami doonno tiro badan oo qalfoof ah, zombies iyo wuxuush badan oo shaashadda ah; waana wax iska cad inaan u baahan doonno mobiil wanaagsan si aan ugu raaxeysanno khibradda aan ka soo sahaminayno Sanctuary halkaas.
Waxaad leedahay diiwaangelintii hore ee Play Store iyo shabakadda diabloinmortal.com waayo, la soco dhamaan wararka Diablo Immortal, in kastoo aan kuu soo qaadan doonno iyaga oo leh xamaasad iyo naxariis waxa u muuqda mid ka mid ah ciyaaraha sannadaha soo socda. Dhamaan hamiga ah inaan waxbadan ogaado iyo inaan ogaado maalinta la bilaabay. Mid weyn ayaa ina sugaya.
Ibliis Ma Dhiman
Price: In lagu dhawaaqo
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Blizzard wuxuu ku muujinayaa fiidiyowga ciyaarta 'Diablo Immortal': si fudud sheeko
OnePlus 6T wuxuu bilaabaa inuu helo Android 10 xasilloon
Legend Apex ayaa imaan kara Android dhamaadka 2020